Inqanaba likaMasipala: Liliphi ixesha elibhekiselele kwiGoli
Iyintoni i-Golf Course?
Ikhosi yegalufa kamasipala igumbi legalufa elilawulwa nguRhulumente. Ngokuqhelekileyo eso sigunyaziso sixeko-umasipala, ngoko ke igama elithi "igumbi legalufa likamasipala." Kodwa iikhosi eziphethwe yi-county okanye urhulumente okanye iphondo lingaphinde lithunyelwe njengezifundo zikamasipala. Ngezinye izihlandlo zegolfu zifakela ingqamaniso kwixesha kwingxoxo (okanye kubhala) ukuya ku- "muni" okanye "mun." Eli gama lisetyenziswe ngokubanzi eUnited States.
Ngubani oqhuba iiKhofu zeGalofu zikaMasipala?
Isixeko, urhulumente okanye elinye iqanaba likarhulumente elinegalofu yegalufu ngokuqhelekileyo isebenza kwikhosi, ngokunjalo, ngokubanzi ngaphakathi kwisebe layo leepaki. Kodwa kuyaqhelekileyo ukufumana iikhosi zikamasipala ezilawulwa liqela langaphandle legalufa lokulawula iglasi egameni likamasipala onayo ikhosi. Ngokude nje ukuba ikhosi inomgangatho othile karhulumente, ingabizwa ngokuba yikhosi yegalufa kamasipala.
Naliphi na umntu onokuyifunda kwiKomiti kaMasipala
Izifundo zegalufa zikaMasipala zihlala zivulelekile nakwiyiphi na igolfu efuna ukudlala. Ukwahlula izifundo zezifundo ezivela kwigumbi legalufa langasese, ngokuqhelekileyo ngamalungu kuphela; kunye nezifundo ezizimeleyo ezizimeleyo, ezinokuthintela ixesha lokudlala kuluntu jikelele.
Nangona ivulekele kubo bonke, iklasi yegalufa kamasipala inokuthabatha abantu basekhaya ngokusebenzisa isakhiwo sayo semali eluhlaza . Ezinye izifundo ze-muni zihlawulisa abahlali abahlali ngezinga eliphezulu kuneendawo. Abanye banikela abahlali bendawo (ngokuqhelekileyo abo bahlala ngaphakathi kweso sixeko okanye kwikomkhulu) kwikhadi lokunciphisa ngonyaka elibafumana amazinga aphantsi kunabemi.
Sekunjalo, wonke umntu unelungelo lokudlala.
Ikhosi yegalufu evulelekileyo kuluntu kodwa eyabelwe ngasese ( engekho phantsi kwenkampani karhulumente) ingabizwa ngokuba "yinkqubo kawonkewonke" okanye "ikhosi yemali yansuku zonke."
IiRhafu kunye noMgangatho kwiiKomiti zikaMasipala
Izifundo zikamasipala zifana naliphi na uhlobo lwesigaba segalufa: Zihamba kwiqondo elivela kumgangatho osweleyo ukuya kwibalaseleyo, kwaye indlela ekuhle ngayo ikhosi ixhomekeke kwixesha, imali kunye nobuchule obubekwa kwisakhiwo nokuyigcina.
Ngokufanayo, iirhafu kwizifundo zikamasipala zixhomekeke kwimali ehambayo yokwakha kunye nokuyigcina. Njengomgaqo oqhelekileyo, iikhosi zikamasipala zihlala ziphantsi kwexabiso okanye phakathi kweendlela eziphantsi kwentlawulo yegalufu ngaphakathi kwidolophu okanye kwingingqi.
Ezinye zezona zifundo zithandekayo zikamasipala zizinto ezincinci, zigqithisekile kwaye zincinci. Abadlali beGoli abakhulayo bedlala kulabo bavame ukugcina indawo epholileyo kubo, nokuba ngaba baya kudlala iikhosi ezingcono kwiimeko ezingcono.
Kukho amaqonga edolophana omdaka kamasipala, kuquka i- Torrey Pines Golf Course eCalifornia, iBetpage Black eNew York, i-TPC Harding Park eCalifornia naseChambers Bay eWashington. Zonke ezo zifundo ziyi-munys, kwaye zonke ziyi-site yePGA Tour tournaments kunye / okanye iqhankqalazo enkulu.
Abaqeqeshi abaPhezulu aphezulu kakhulu kwiKholeji yeBhola leKholeji
Indlela yokudlala i-Murphy Bet In Golf
Indlela yokwenza umtshato: Yintoni okuyiyo kunye nendlela esetyenziswa ngayo
Iingcebiso kubaqalayo ukufunda ukufunda indlela yokuhamba
Funda indlela yokufunda ii-NHL Standings
Ngaba kukho ukuhlukana kwiiKhobhu zeGalati zaBantu naBafazi?
Indlela yokuba yi-Tennis Teaching Pro: Icandelo I
Iingcebiso ezili-12 zokuqhuba iNdlela yokuHlaba kweeNkcubeko
Umculo ozithandayo we-Skating Skating
Ingxowa yebhola - Inkcazo kunye nencazelo
Ukwazisa "I-Demo More Demo Jump kwi-Skydiving"
Ngaba Unqulo Lwama-Atheist Unqulo okanye Unqula uSathana?
IYunivesithi yaseArizona State Admissions
I-Vastu Shastra: Iimfihlelo zekhaya elinoNwabile kunye neloPhilile
Yintoni iRejista kwiiLwimi?
Inkcazo kunye neMisebenzi ye-Ethnomethodology
Iiprogram ze-GSB ze-GSB kunye ne-Admissions
I-Paleocene Epoch (i-65-56 yeMillion Years Ago)
Ezingaphezulu ezi-4 zeLullabies zesiLimi zesiJamani eziLungiswa kubantwana namhlanje
Ulwandle lwe-Atlantic Ocean
IVangeli NgokukaMarko, Isahluko 8
Admissions University College
Yisiphi Isiqhamo Esivinini?
Funny Holiday Books
Imifanekiso Yemibala Yemibala Ye-Art History
Ukudweba isifundo: Sketch Horse Horse
NgoSeptemba Izihloko, iiHholide zeeKholide, kunye neMicimbi yabaFundi abaQalayo
Iindlela ezi-5 zokwenza icawa eyahlukana ngokukhethekileyo yeCawa
Funda ukudibanisa okulula kwe "Manquer" (ku-Miss)
Ukufaka isicelo kwiSikolo soMthetho
I-10 Iimoto ezingabizi kakhulu ezifumaneka eMelika
Izibhengezo zeeHlabathi zeMidanso yeHlabathi kunye neZiphumo
I-Undefeated 1972 i-Miami Dolphins